मार्शल मीटर एक रहस्य मान्छे हो?
कला र मनोरञ्जन, संगीत
मार्शल मीटर - यो देखिन्छ, औसत अमेरिकी नामको औसत नाम र उपनाम। तथापि, सबै कुरा सजिलो छैन, किनभने यो विश्व राप उद्योगको सबैभन्दा लोकप्रिय प्रतिनिधिहरू मध्ये एक नाम हो - ईमिने। हो, तपाईंले गलत व्याख्या गर्न गर्नुभएन, रापरले उनीहरूको भाषणहरूको लागि एक छद्म नाम प्रयोग गर्दछ।
मार्शल ब्रूस Mathers III, कि प्रतिभाशाली राप कलाकार को नाम छ जो लगभग 15 वर्ष पहिले आफ्नो मूल गानों संग विश्व संगीत संस्कृति बहाली। किशोरहरूले उहाँलाई एक नयाँ मसीहलाई देखे, किशोरीहरूलाई बुझ्न, प्रेम र हेरचाह चाहिने वयस्कहरूलाई व्याख्या गर्न सक्थे।
एमिमेन्सन 17 अक्टोबर, 1972 मा जन्मेका थिए, र धेरै बचपनबाट उनी शायद नै घरमै बसिन् र साथीहरूसँग सडकमा हराउन चाहन्थे। जब उनी एक किशोरी थिए, उनी राप संगीतमा संलग्न भए र पहिलो पटरिहरु रचना गर्न थाल्यो, र 1 996मा उनी D12 समूहको सदस्य बनेकी थिइन्, जहाँ उनी भविष्यका उत्पादक - डा। ड्रेको अनुभवमा देखिए। पछिको नेतृत्वमा, एमले एकल क्यारियर सुरू गर्यो।
1 999 एमिमेनको लागि एक शुभकामना वर्ष थियो, त्यसपछि यो थियो कि उनले आफ्नो पहिलो सीडी, द स्लिम श्याडी एल.पी. मार्शल मेट्स उनको आसपास को दुनिया मा एक सम्पूर्ण नयाँ परिप्रेक्ष्य र सामान्य मान्छे को पेशकश गर्न को लागि प्रबंधित। संसारको लागि उपेक्षा सबै कुरा मन परायो, त्यसैले गायकको क्यारियर पहाड माथि गए।
सफलताको लहरमा, एमिनेनले अर्को रेकर्ड रेकर्ड गर्दछ, जुन अझ सफल हुन्छ र उनको राप्परको लागि एक प्रतिष्ठित संगीत पुरस्कार प्राप्त हुन्छ - "ग्रैमी।" एल्बम छिट्टै विश्वभर फैलिएको छ, केहि देशहरूमा यो थप संस्करण जारी गर्न आवश्यक थियो। दोस्रो एल्बमबाट शुल्कहरू संगीतकारले आफ्नो आफ्नै लेबल स्थापित गर्न अनुमति दिए, जसमा समूह D12 काम गर्न जारी राख्यो।
अर्को एल्बम पनि सफल भए, र मार्शल ब्रूस माबरले उनको लागि ग्रमी पनि प्राप्त गर्यो। यस समयमा, कुनै पनि एक राप कलाकार को रेकर्ड तोडने मा कामयाब छैन: उनले "प्रतिष्ठित रैप एल्बम" को श्रेणी मा यो प्रतिष्ठित पुरस्कार को तीन पल्ट जीत दिए, जसलाई पर्याप्त प्रतिष्ठित साथीहरु को पछि छोड दिए छ।
2005 देखि 2009सम्म, इमिनेले एक ब्रेक लिन निर्णय गर्यो। धेरैले यो योगदान दिए: तीव्र गतिमा स्वास्थ्य बिग्रियो, घनिष्ठ मित्रको मृत्यु, परिवार र आमासँग समस्याहरू। चार वर्षको लागि, रापपर चुप थियो, साक्षात्कार वा बयान दिने छैन। चरणमा फर्किएपछि उनले स्वीकार गरे कि उनले आफ्नो छोरी हेल जेड संग धेरै समय खर्च गर्न खोजे।
एमिनेको फिर्ती एल्बम रिजल्ट थियो, जुन प्रशंसकहरूले खुशीको साथ भेट्थे, उनीहरूको मूर्ति देखाउँछन् कि उनीहरूले उनीहरूलाई कसरी हराए। 2009मा मार्शल मेट्स ले दशकको डिस्क बिक्रीमा नेता बनेको थियो, 2000 देखि 2009सम्म उनले आफ्नो डिस्कको 100 भन्दा बढी भन्दा बढी प्रतियां बेचे।
2010 र 2011 मा, दुई थप एल्बमहरू रिलीज भएको थियो, संगीतकारले जनतालाई कुन कुराको बारेमा सोचेको थियो कि पछिल्लो समयका लागि उनको टाउकोमा के भयो। आजसम्म, मार्शल मेट्रर्समा उहाँका संगीत उपलब्धिहरूको लागि तेरह ग्रामी पुरस्कारहरू छन्, र यो, आलोचकहरूको अनुसार, सीमाबाट टाढा छ, र एमिनेमले आश्चर्यको प्रतीक्षा गर्नुपर्छ।
तथापि, राप्पर अप्रत्यक्ष रूपमा आफ्नो नयाँ एल्बम मार्शल माई बाबु एलपी संग उनको अपेक्षाहरु को पुष्टि गरे। यहाँ एम्मीन, आलोचकों को अनुसार, अब एक बेवकूफ घातक छ, तर एक वयस्क जो आफ्नो कार्यहरु को बारे मा जान्दछन् र उनको लागि एक निश्चित जिम्मेवारी को लागि तैयार छ।
दिमित्री बेलिन: जीवनी र रचनात्मकता
साम्बा - जीवनको नृत्य, आनन्द र खुशी
मोजार्टका कामहरू: एउटा सूची। Wolfgang Amadeus Mozart: रचनात्मकता
Korolev आंद्री: जीवनी र रचनात्मकता
एलेक्सी ब्रायनवको जीवनी - "चान्सन" शैलीमा युवा संगीतकारको प्रतिज्ञा
खोक्रो ईटा लागि Dowels: सुविधाहरू, प्रकार र सिफारिसहरू
टोबिया मोर्टेटी एक लोकप्रिय ओस्ट्रियाई अभिनेता हो
एन्ड्रोइड मा APK कसरी स्थापना गर्न - पुस्तिका
मानिसहरू मा धब्बा मा Columnar epithelium: ट्रान्सक्रिप्ट विश्लेषण
Zheltushnik खैरो: औषधीय बिरुवाहरु को प्रयोग
Microorganism - कि जीवन को रूप मा छ?
आधुनिक समाजमा परिवार
सञ्चालन Wertheim: सञ्चालन, नतिजा, जटिलताहरू, समीक्षा को पाठ्यक्रम
Burr Grinder - विगत देखि वर्तमान